M-nlereanya - Geofumadas
Ntak eji ejima ejiri rụọ ọrụ
Ihe niile gbara anyị gburugburu na-aga dijitalụ. Teknụzụ dị elu dị ka ọgụgụ isi na Intanet nke Ihe (IoT) na-aghọwanye akụkụ dị mkpa nke ụlọ ọrụ ọ bụla, na-eme usoro ngwa ngwa ma na-arụ ọrụ nke ọma na ọnụahịa, oge na traceability. Gaa na dijitalụ ...
Ndị na-esochi onyinye afọ a
Bentley Systems ekwuputala oru nke ikpeazụ maka onyinye nke ihe kachasị mma na ojiji nke ngwanrọ ngwanrọ na njikwa akụrụngwa. Enwere ndị ikpeazụ 57, na-abịa site na nhoputa 420 n'ụwa niile maka ihe omume a nke 2018. Ọnụ ọgụgụ ahụ dị oyi mana ha na-egosi ihe kpatara afọ gara aga na Singapore, isi ụlọ ọrụ ...
Debe Bing Bing dị ka map ndabere na Microstation
Microstation na Mbipụta Njikọ ya, na mmelite ya 7 arụgoro ohere iji Bing Map dị ka akwa ọrụ ihe oyiyi. Agbanyeghị na ọ ga - ekwe omume tupu, o were igodo melite Microsoft Bing; mana dịka i nwere ike icheta, Microsoft bụ onye mmekọ Bentley ugbu a na Pavilion Alliance…
Ndebanye aha na Cadastre na ihe gbasara otu National Transactional System
Kwa ụbọchị mba na-elekwasị anya na omume e-gọọmentị, ebe usoro dị mfe iji chọọ inye ụmụ amaala ọrụ ka mma, yana ịbelata oke maka nrụrụ aka ma ọ bụ ọrụ nchịkwa na-enweghị isi. Anyị maara na iwu, ụlọ ọrụ na usoro gbasara ihe onwunwe na mba ọ bụla bụ ...
cadastre, Apụta, Geospatial - GIS, My egeomates
Bentley ProjectWise, ihe mbụ mkpa ka ị mara
Ihe a kacha mara amara na Bentley bụ Microstation, yana ụdị ya kwụ ọtọ maka ngalaba dị iche iche nke geo-engineering na nrụsi ike maka imewe maka ụlọ ọrụ obodo, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ na njem. ProjectWise bụ nke abụọ Bentley ngwaahịa na-ejikọ njikwa ihe ọmụma na ijikọ otu ọrụ; na nso nso a weputara ...
Bentley Systems DGN dwg M-nlereanya
Engineering, Microstation-Bentley, mbụ echiche
Ịghọta nghota BIM, n'ihe banyere Bentley Systems
N'okwu ndị dị mfe, BIM (Nleba Ozi Mgbasa Ozi) bụ mmalite nke echiche ọdịnala a na-akpọ CAD (Kọmputa Aided Design) na agbanyeghị na e nwere akwụkwọ niile edere banyere nke a mgbe Jerry Laiserin mechara ka okwu a pụta, maka ebumnuche agụmakwụkwọ anyị ga-anwa ịdị mfe dị ka o kwere mee: Tupu, mgbe ị na-emepụta ụlọ, onye na-atụpụta ụlọ mgbe ọ nwụsịrị nke ọma ...
AutoDesk Bentley Systems DGN M-nlereanya
Apụta, innovations, Microstation-Bentley
Blogsy bụ ihe magburu onwe ya ngwá ọrụ, ruo ugbu a ihe kachasị mma maka ide ihe na iPad. Dị ka ngosipụta, Achọrọ m imelite isiokwu a dịka a na-enye onyinye. Ọ ga-amasị m ịgbaso ndị ọbịa ahụ na Woopra na-ebi, mana edemede ya dị arọ nke na ọ tụbara m saịtị ahụ ugboro ole na ole, ọ ...
Bentley M-nlereanya, mmekọrịta site na ODBC
M-nlereanya bụ atụmatụ Bentley iji mee ka ngosipụta nke dgn faịlụ pụta ìhè, yana ohere nke nyocha, nyocha na ịkọwapụta xml agbakwunyere. Agbanyeghị na enwere plugins iji mekọrịta yana AutoDesk Revit na iPad, ikekwe arụmọrụ emere maka pdf ndị na - agụ akwụkwọ na onye nyocha Windows 7 pụtara nke ọma na nke a.